Sat, Jul 11, 2020 at 2:47pm
अब सुनचाँदी बैंकमा राख्दा ब्याज पाइने
काठमाडौं, ८ साउन । अब सुनचाँदी लगायतका बहुमूल्य धातुहरु बैंकमा राख्दा ब्याज पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो । सरकारले चालु आथिर्जक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको हो । बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जिवी नेपालले बैकले सुनचाँदी राखेर ब्याज..
मौद्रिक नीति सार्वजनिक : विग मर्जरमा जानेलाई 'वम्पर अफर'
काठमाडौँ, ८ साउन । गभर्नर डा.चिरञ्जिबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरका लागि वम्पर सुविधा दिएका छन् । उनले ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । तर,..
वार्षिक साढे ६ अर्बको काठ आयात, आत्मनिर्भर उन्मुख उत्पादनमा दाबी
काठमाडौँ, ८ साउन झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ! मुलुकको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक रु साढे अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । तर यो कुरा साँचो हो, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न मुलुकबाट रु छ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ३९ हजारको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार..
वार्षिक आठ खर्बसम्म कर छली, यसरी हुन्छ कर छली
काठमाडौँ, ८ साउन । मुलुकमा बर्सेनि कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको झन्डै आधा बजेटसरह हो । यसरी कर छली हुँदा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा त्यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका..
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वास्तविक हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ, ७ साउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यावसायिक इमानदारीलाई अक्षुण राख्दै लेखापरीक्षकहरूले यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वास्तविक र यथार्थपरक हुनेैपर्ने अपरिहार्यता औँल्याउनुभएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेटस् संस्था (आइक्यान) ले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर लेखापरीक्षकले कुनै पनि संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य ‘जे हो त्यही..
शान्तिनगरस्थित तरकारी बजारको अनुगमन, ७ व्यापारीमाथि कारवाही
काठमाडौँ, ७ साउन काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेपछि सरकारले तरकारी बजारको अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । केही दिनअघि कालीमाटी र बल्खुस्थित तरकारी बजारको अनुगमन गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज बानेश्वरको शान्तिनगरस्थित तरकारी बजारको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा सात वटा पसलले तरकारीको मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग गरेको भेटिएपछि अनुगमन टोलीले कारवाही गरेको छ । किसान, ढुवानीकर्ता वा..
हुवावेकाे वाई ९ प्राइम अब नेपाली बजारमा, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडाै, ७ साउन । हुवावेकाे पप–अप क्यामरा भएको वाई ९ प्राइम २०१९ नेपालीबजारमा सार्वजनिक भएकाे छ । हुवावे वाई ९ प्राइम २०१९ सिरिजअन्तर्गत पप–अप क्यामरा र पूरै एचडी डिस्प्ले भएको बेजल–लेस फोन सबैभन्दा सस्तो दरमा उपलब्ध छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनी हुवावेले नेपालीबजारमागरेकाे साे स्मार्टफोनको मूल्य २९ सजार ९ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ। वाई ९ प्राइम २०१९ कालो, नीलो र..
भरतपुरमा १ कठ्ठा घडेरीको २ करोड ८० लाखसम्म, यस्तो छ सरकारी मूल्यांकन
चितवन, ७ साउन । चितवनको जग्गा छोईन सक्नु भएको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै चितवनमा जग्गाको मूल्य आकासिएको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा जग्गाको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चितवनको सबैभन्दा महंगो जग्गा (घडरी) मा भरतपुर महानगरपालिका अन्र्तगत लायन्स चोकबाट शहिद चोक हुँदै पुलचोक नारायणी पुलसम्म (शहिदपथ ) महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका घडेरीको मूल्य प्रति..
मेची भन्सारको मुद्दा फछ्र्योटबाट ३ करोड बढी राजश्व
भद्रपुर, ७ साउन । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा दर्ता भएका मुद्दा फछ्र्योटबाट मात्रै रु तीन करोड बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले ५३० मुद्दा फछ्र्योट गर्दा रु तीन करोड ३६ लाख ५८ हजार राजश्व असुली गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ बाट सरी आएका १७ तथा गत..
सञ्चित कोष दुई खर्ब घाटामाः आम्दानी नौ खर्ब ६ अर्ब, खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब
काठमाडौँ, ७ साउन । संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी) ठूलो घाटामा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारको ट्रेजरी अवस्था दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। सरकारको यथार्थ खर्चमा नगद मौज्दात भए पनि संघीय सरकारबाट तल्लो तहको सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर भएपछि संघीय सरकारको खर्चमा देखिन्छ। ‘यो हाम्रो बजेटको लेखा प्रणालीमा समस्या पनि हो। दोहोरो एकाउन्टिङका कारण..
'सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार'
काठमाडौँ, ६ साउन गुणस्तरीय जीवनयापन र गरीबी निवारणमा सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक संरक्षण सहायकसिद्ध हुने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा चर्चा र बहस हुँदै आएको छ । गरीब, बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा असहाय, विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको खाँचो हुनेमा सबैको मतैक्य पाइन्छ । सामाजिक जोखिम र जटिलताबाट नागरिकलाई बचाउने, जोगाउने वा संरक्षण गर्ने काम नै सामाजिक संरक्षण हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा फैलँदो..
काठमाडौँ, ६ साउन । जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तथा मानव संशोधन विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु ६३ करोड ९९ लाख अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रमममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगो र अर्थ सचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गर्नुभयो । आजै ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौतापत्रमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका)..
राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा अर्थमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ, ५ साउन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण वर्तमान सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । उहाँले त्यसमा सघाउन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज अपराह्न आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगका पूर्वाधार बनाउनेलगायत कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुुभयो । स्वच्छ, पारदर्शी र इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै उहाँले अनौपचारिक व्यापारबाट विमुख हुनुपर्नेमा जोड..
सुन-चाँदीकाे मूल्य घट्याे, कति पुग्याे ?
काठमाडौं, ५ साउन । आइतबार नेपाली बजारमा सुन-चाँदीकाे मूल्य घटेकाे छ । लगातर उकालाे लागेकाे सुनकाे मूल्य आज ५ सयले घटेकाे हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बजारमा छापावाल सुन तोलामा पाँच सयले घटेर ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार सुनकाे मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु अर्थात ६५ हजार ५ सयमा काराेबार भएकाे थियाे ।त्यस्तै तेजावी सुन तोलाको ६४ हजार ७ सय..
काठमाडौँ, ३ साउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) अब अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चेम्बरमा आज आयोजित कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी र चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीको प्रारम्भिक शुभारम्भ गर्नुभयो । अनलाइनबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएसँगै निकासी प्रर्वद्धनको क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यससँगै निकासी व्यापार सहज, सरल,..
अनिवार्य लिनुस् प्यान, विभागद्वारा यस्तो निर्देशन !
भक्तपुर, ३ साउन । आन्तरिक राजश्व विभागले व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न हुने वा अग्रीम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लिन आग्रह गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक व्यक्ति, एक स्थायी लेखा नम्बर’ भन्ने नीति लिएको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै विभागले उक्त नीतिको कार्यान्वयन गर्न सबैलाई लेखा नम्बर लिन..
वैदेशिक राेजगारी : ११ महिनामै ८ खर्ब रेमिट्यान्स
काठमाडौं, ३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जेठ मसान्त सम्ममा १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५।७६को ११ महिनामा ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । अमेरिकी डलरमा व्यक्त गर्दा विप्रेषण आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले..
काठमाडौं, ३ साउन । शुक्रबार सुनको मूल्‍यले नयाँ रेकड कायम गरेकाे छ । आज सुन ताेलामा ५ सयले बढेर ६५ हजार ५ सय रूपैयाँ कायम भएकाे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायीका अनुसार छापावाला सुनको मुल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेर ६५ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मुल्य तोलाको पाँच सयले बढेर ६५ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो। असार..
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ४७ अर्ब राजश्व सङ्कलन
विराटनगर, ३ साउन आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कूल रु ४७ अर्ब २४ करोड ३४ लाख राजश्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । सङ्घअन्तर्गत रहेका सो कार्यालयमा अघिल्लो आवमा रु ४० अर्ब ४० करोड ४० लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो । तुलनात्मकरुपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १७ प्रतिशत राजस्व बढी सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख किशोर बरालले जानकारी दिनुभयो । गएको..
काठमाडौँ, २ साउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले अबदेखि कसैसँग पनि चन्दा नलिने निर्णय गरेको छ । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक ऐन महरले सङ्गठन सञ्चालन गर्न संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा निजी शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयबाट कुनै आर्थिक सहयोग नलिने बताउनुभयो । “अब अनेरास्ववियुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा निजी शैक्षिक संस्था तथा..
नयाँ व्यवस्थापनसँगै डिडिसी नाफामा, ५ करोड मुनाफा
काठमाडौँ, २ साउन सरकारी स्वामित्वका संस्थान सेतो हात्ती भइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भने त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सही निर्णय, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कार्यशैलीमा सुधार र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने हो भने निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान पनि नाफामा जान सक्छन् भन्ने यथार्थ संस्थानले प्रमाणित गरेको छ । अघिल्लो दुई आर्थिक..
ह्वात्तै बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
काठमाडाैं, २ साउन । नेपाली बजारमा लगातार ५ दिनदेखि स्थिर रहेकाे सुनकाे भाउ आज ह्वात्तै बढेकाे छ ।बिहीबार सुनको प्रतितोला मूल्य ५ सय रुपैयाँ बढेको हाे। करिव एक हप्तादेखि ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको सुन आज ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै सुनको मूल्य बढेकाले यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको ब्यवसायीहरु बताउँछन्। त्यस्तै चाँदीको मूल्य..
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढेको तलब : कुन तहकाले कति थाप्छन् ?
काठमाडौँ, १ साउन सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढाएको तलब आजदेखि लागू हुनेछ । कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले करिब साढे ५ लाख हाराहारी संख्यामा रहेका कर्मचारीको तलब साउन १ देखि लागू हुने गरी बढाएको हो । कार्यालय सहयोगीदेखि नायब सुब्बासम्मको तलबमा २० प्रतिशत र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ..
ललितपुरको बजेट ५ अर्ब ३१ करोड, सम्पदालाई प्राथमिकता
ललितपुर, १ साउन ललितपुर महानगरपालिकाको चांैथो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि रु पाँच अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ५७ हजारको बजेट पारित गरेको छ । गत असार १० गते महानगरपालिकाले यस आवका लागि रु पाँच अर्ब १७ करोड १६ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सोमबार कार्यपालिका बैठक बसी ६६ नगर तथा २६ कार्यपालिका सदस्यद्वारा १० बुँदा संशोधन माग..
कति कमाउनेले राज्यलाई कति कर तिर्ने ? यस्ताे छ करकाे सूची
काठमाडौं, १ असार । व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले पनि हरेक वर्ष व्यक्तिले गर्ने आयआर्जनमा लिने करको दायरा फरक गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिको आयआर्जन कर पनि राज्यले विभिन्न तवरबाट संकलन गर्दै आएको छ। सोहीअनुरुप सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७..
आर्थिक वर्ष सुरु : यस्ता छन् आजदेखि लागू हुने नयाँ नीति–नियम
काठमाडौँ, १ साउन नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बुधवार बाट शुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् । सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सहित नयाँ आवको बजेट गत १५ असारमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट ९ खर्ब..
Results 1683: You are at page 16 of 57